मङ्सिर ८ गते सोमबार, कस्तो रहला तपाइको दिन? हेर्नुहोस दैनिक राशिफल! – च्यालेन्ज नेपाल
challengenepal November 23, 2020 1 min read
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) अरुको बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । स्वास्थमा सामान्य समस्या आउन सक्छ । खानपानको गडबढिका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा अरुको दबाबको महसुस हुनेछ । स्रोत धनकुटा खबर
Previous हलेसी महादेवथानले सबैको रक्षा गरुँन ! – हेर्नुहोस् कात्तिक १० गते सोमबार आजको राशिफल
Next आज मंसिर २७ गते यी5राशी हुनेहरुको करोडपति बन्ने योग छ हेर्नुहोस पुरा आज २७ गते शनिबारको राशिफल